Intokazi eyafunda ngokuba ngumdlali izimisele ukuthuthukisa umdlalo - Bayede News
Isithombe: nguMark Nolan/Getty Images
Ifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi wonke umdlali uyakuthola lokho okufanele abe nakho.
UPrecious Mthembu ongumdlali aphinde abe ngumqeqeshi emdlalweni womnqakiswano uthi uzimisele ngokwenza izinguquko kulo mdlalo.
Le ntokazi yakwaMthembu ithe izibophezele ekuthuthukiseni ikhono labadlali abasebancane iphinde ilwele amalungelo abo bonke abadlali abancane nabadala.
Lo mdlali onemnyaka yobudala engama-36 odabuka eThekwini unyelwe inyoni esandleni emasontweni edlule njengoba ethole isikhundla sokuba nguSihlalo weKhomishini yabasubathi yeKwaZulu-Natal Sports Confederation Additional Exco.
Ekhuluma ngokuqokwa kwakhe njengoSihlalo uthe: “Kuyinto engijabulisayo neyingqophamlando kimina ukuthi ngiqokelwe kulesi sikhundla. Okujabulisayo ukuthi ngibe umdlali isikhathi eside, ngiyazi ukuthi kunjani ukungakutholi okufanele ukuthole. Umsebenzi wami ukuxhumana nemifelandawonye, okaputeni kanye nabaphathi ukwenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu ujabulile ngesikhundla akusona. Ukuqinisekisa nje ukuthi wonke umuntu unakho okufanele abe nakho.”
Eqhuba uthe: “Kunethalente eliningi lapha esifundazweni iKwaZulu-Natal. Kunabadlali abaningi abanethalente elicashile, lokho kumele sikulwele ukuthi siliveze. Abancane sidinga ukubatholela izinkulisa eziseqophelweni kunjalo kumele sibabhekelele ukuthi baqhubeka baye kuphi. Uma abasubathi bengenakho ukwesekwa futhi izidingo zabo eziyisisekelo zingagculiseki bagcina bedikibala kuyona yonke imixa yezemidlalo leyo nto ihlezi yenzeka. Lokho sifuna ukukunciphisa ngoba siyakholwa ukuthi ukuze kube kuhle esigabeni esiphezulu kumele kulungiswe izinkulisa.”
Ngaphandle kokuba kulesi sikhundla uPrecious uphinde abe isekela mqeqeshi weqembu lesizwe labaneminyaka engaphansi kwengama-21, iSpar Baby Proteas, lapho ebambisene noDkt u-Elsje Jordaan.
Akagcini lapho uphinde abe ngukaputeni weqembu iKwaZulu-Natal iKingdom Stars eliyibamba kuligi enkulu kuleli iTelkom Netball League (TNL).
Uthe, umdlalo webhola lomnqakiswano uyiguqule kakhulu impilo yakhe futhi unethemba lokuthi kukhona oyohamba ezinyathelweni zakhe njengoba enothando olukhulu ngawo.
Unyaka wayo le ntokazi iwuqale kahle njengoba ihlabane ngendondo yeDiamond Award esikoleni eyayifunda kuso iDanville Park Girls High School. Unethemba lokuthi lo mklomelo ukhuthaza abantu abasha ukuthi balandele amaphupho abo futhi bavumele amakhono abo ukuba abavulele iminyango eminingi.
“Angizange ngikhokhe ngisho isenti elimnyama ukuze ngifunde kulesi sikole kodwa ngafunda ngomfundaze. Okwakumele ngikwenze nje kwakuwukudlala ibhola lomnqakiswano. INetball iyiguqule impela impilo yami futhi nginethemba lokuthi kukhona ozohamba ezinyathelweni zami. Ukuthatha uhambo engiluthathile ngokusebenzisa ezemidlalo ukuguqula impilo yabo,” kusho uPrecious.
Ngakho konke asekwenzile, ukhuthaza abasubathi abasebancane ababheke kuyena ukuthi batshale imali yokufunda.
“Ngicabanga ukuthi imfundo iwukhiye wabo bonke abadlali abasebancane. Ukuya esikoleni kubalulekile, ikakhulukazi uma ungowesifazane okwezemidlalo lapha eNingizimu Afrika. Le midlalo esiyidlalayo ayiyona eyezingcweti, udinga ukuthi ube nenye indlela yokufaka imali,” kusho uPreciuos.
Kuyimanje useKapa lapho kunemidlalo yochungechunge i-2021 Spar Challenge eqale izolo ebanjelwe eCape Town International Convention Centre (CTICC).
Lo mqhudelwano unamaqembu ayisi-5 okubalwa i-Uganda, iNamibia, iPresident X11, iSpar Baby Proteas neSpar Proteas. Lolu chungechunge luzosongwa mhla zingama-31 kwephezulu.